Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2016
Tantaran'ny teny malagasy: Ny Loharano
2016-07-23 @ 20:01 in Kolontsaina
Aleo ianao mba entina kely any amin'ny tantara indray. Fampirantiana iray naharitra vetivety no itondrana anao. Sombiny ihany ireto sary ireto ho fitarihan-dalana anao. Mazotoa indrindra ary!
Araka ny fitantarana dia i Di... na Rahaingoson Henri no nanomboka ny roa andron'ny teny malagasy voalohany, nitarina ho iray volan'ny teny malagasy izany taty aoriana. Izy ihany koa no niandohan'ny fitenenana hoe "Andrianiko ny teniko, ny an'ny hafa koa feheziko". Raha mijery ny zavamisy ankehitriny anefa aho dia toa "Andrianiko ny an'ny hafa, ny teniko indray tsy raharahako fa mety ho haiko ho azy eo!" Miala tsiny masiaka fa fijeriko manokana izay amin'ny fihazakazahana amin'ny sekoly miteny frantsay. Tsy aleo ve tonga dia sekoly frantsay no ihazakazahana raha te-ho any Frantsa ihany?
Ny afisy voalohany
Amin'ny Afisy voalohany no ilazany ny loharano.
Maromaro ireo loharano nipoirany fa tsy voatery ho iray: Karibo! teny soahily milaza ny hoe mandrosoa fiteny any avaratra. Fanitsiana: Sanskrit no fanoratra fa tsy voamarika loatra ilay fahadisoan-tsoratra hoe Sasnkrit.
Mifanila ary ny Sorabe sy ny endritsoratra Latina eto.
Ny Afisy faharoa
Radama Rainy no nandidy ny hanaovana ny abidia malagasy.
Tsy azo lavina fa ny fandrafetana ny teny malagasy avy amin'ny baiboly no nakana ny endriky ny fanoratana teny malagasy ankehitriny.
Ireo kosa ary ny endriky ny fiteny malagasy isankarazany eto amintsika. Teny iray, fiteny maro!
Dia hatreo ny anio fa sao lava loatra aminareo. Fitarihan-dalana ihany no nataoko sy fampitana azy aminareo rehetra!